दलान नेपाल : August 2014
फोरम लोकतान्त्रिकमा किन नाम फेर्ने मुद्धा उठदैछन ?
पहिलो संविधानसभाको विघटन संगै विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी भित्र पार्टीको नाम फेर्ने मुद्धा बारम्बार उठने गर्छन ? आखिर किन ? पार्टी भित्रको यसको वारेमा प्रष्ट रुपमा दुई धार देखिन्छ । एउटाले भन्छ, राष्टिय पार्टी बनाउनु पर्यो, त्यसका लागी पार्टीको नाम फेर्नै पर्छ । अर्को पक्ष भने, नफर्ने पक्षमा देखिन्छ । थारु समुदायवाट प्रतिनिधित्व गर्ने लक्ष्मण थारु लगायतका पक्षहरु नाम फेर्नु पर्ने पक्षमा छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय लगायतका नेताहरु नाम नफेर्न पक्षमा देखिन्छ । आखिर के लक्ष्मण थारुकै चाहना अनरुप फोरम लोकतान्त्रिक भित्र नाम फर्ने मुद्धा वारम्वार उठदै छन त ? मधेश राजनितीका भित्रियाहरु यसको कारण लक्ष्मण थारु लगायतको चाहना अनुरुपको राष्टिय मुद्धा भन्दा पनि विजय गच्छदारको व्यक्तिगत राजनितीलाई ठान्छन ।
फोरम नेपालको प्रमुख सचेतकमा शिवजी यादव
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको प्रमुख सचेतकमा सभासद शिवजी यादव मनोनित भएका छन । बुधवार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शिवजी यादवलाई प्रमुख सचेतक तथा उपाध्यक्ष लालबाबु राउतलाई उपनेतामा मनोनित गरेको उक्त पार्टीले जनाएको छ । केही समय अघि फोरमको पार्टी कार्यलयमा शिवजी यादव र पार्टीको नेतृ रेणू यादव विच गालीगलौच सहित झगडा भएपछि पार्टीले शिवजी यादवलाई सात महिनाको लागी निलम्बन गरेका थिए ।
गोइतजी विखण्डन चाहनुहुन्न — आन्नदप्रसाद ढुंगाना
at 7:16 AM Posted by Dalan
० प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले संविधानसभा बाहिरका विभिन्न दल र सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता कसरी अगाडि बढ्दैछ ?
— हामीले खासगरी संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दल र संविधानसभा बाहिरका राजनीतिक दलहरू वा सशस्त्र समूह सबैलाई समेटेर सहमतिका साथ संविधान बनोस् भन्ने उद्देश्य राखेका छौं । हामीले संविधानसभाभित्रका पार्टीहरू मात्र होइन कि बाहिरका पार्टी र सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गर्ने र उनीहरूका विचारलाई संविधानभित्र पठाउने उद्देश्यले नै नियमावलीमा परिवर्तन ग¥यौं । हिजोको नियमावलीभन्दा अहिलेको नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको छ । त्यसै आधारमा अहिले हामीले संविधानसभाभित्रका राजनीति दलहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं । संविधानसभाभन्दा बाहिरका दलहरूसँग पनि हामी वार्ता गर्दैछौं ।
० सशस्त्र समूहहरूसँगको वार्ता कस्तो रह्यो ?
— इलाममा हामीले सात समूहसँग वार्ता गरेका छौं । त्यसमध्ये सशस्त्र समूह पनि छन् । सातमा छ वटा सशस्त्र समूह रहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा त्यस्तो समूह पनि छ जो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । त्यो दलसँग पनि वार्ता भएको छ । त्यो दलका नेताहरूले हामीले संविधानसभा बहिष्कार त गरेका हौं, तर दोस्रो संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा हाम्रो सहयोग हुन्छ भनेका छन् । त्यसैले हामीले उनीहरूका समस्या र विचारहरू वहसमा ल्याउनुपर्ने विषयका बारेमा छलफल ग¥यौं । शासकीय स्वरूपको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा हामीले छलफल गरेर मूल समितिमा राखिसकेका छौं ।
० संविधानसभा बाहिरका दल र सशस्त्र समूहसँग भएका वार्तामा के–के सहमति भयो ?
— खासगरी संविधानसभामा जुन विषयमा बहस भइरहेको छ । त्यही विषयहरूमा नै ती दलहरूको पनि चासो छ । संविधानसभामा शासकीय स्वरूप, राज्यको पूनर्संरचना, मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी सम्पूर्ण परिवर्तनबारेमा बहस हुँदैछ । त्यही बहसभित्रका कुराहरू उनीहरूले पनि राखेका छन् । देशको परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर होस् भन्ने नै उनीहरूको पनि चाहना छ । नेपाली जनताभित्रको विचार उनीहरूमा पनि हामीले देख्यौं । ती विचारहरूलाई हामीले बहसमा ल्याएर अगाडि बढ्छौं । केही सशस्त्र समूहहरूमा विखडण्नका कुराहरू पनि थिए । तर, अब उनीहरूले विखण्डन होइन स्वायत्त प्रदेशका कुरा गरिरहेका छन् । जुन प्रदेशहरू बन्छन् ती प्रदेशका जाति, जनजाति, आदिवासी, मधेशी, महिलाका अधिकार सुरक्षित हुनुप¥यो भन्ने उनीहरूको चाहना छ । अहिलेसम्म एकीकृत राज्य प्रणालीका कारणबाट जुन विभेदहरू भएका छन् ती समाप्त हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । र, संघीय आधारमा राष्ट्र जानुप¥यो । यस्तै कुराहरू उनीहरूले राखेका छन् । उनीहरूले हामीले विखण्डनको कुरा होइन अधिकारको कुरा मात्र गरेका हौं भनिरहेका छन् । तिनीहरूले विभेद नरहोस् भन्ने इच्छाको आधारमा हतियार उठाएका थिए ।
नियण्त्रणकारी ऐनको दुरुपयोग हुनाले तराईमा आतङ्क र अपराध निरन्तर
धेरै पहिले डाँकुहरुबाट सुरक्षित हुनाकालागि तराईका जमिन्दारहरुले घरेलु हतियार राख्थे । राजा महेन्द्रले “कू” गरेपछि तराईमा राजनीति गर्नेहरुले अवैध हतियार भित्राए । तराईको राजनीतिक माग पूरा गराउन उसबेला रामजी मिश्र समेतले तराई मुक्ति मोर्चाको गठन गरेर अवैध हतियार भित्राएका थिए । उनी जून १९६३मा प्रहरीद्वारा मारिए । यसपछि अवैध हतियार र तराईको राजनीतिवीच गहिरो नाता गाँसियो । तराईमा हतियार प्रयोग गर्नेहरुमा नेताहरुसंगै अपराधीहरु पनि थपिए । खोपकेको अनुसन्धानमा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्न बनाईएको हातहतियार तथा खरखजाना ऐन (२०१९) तराईमा प्रभावकारी हुन नसकेपछि हत्या, अपहरण, लागू औषध कारोवार र अवैध हातहतियार आतङ्कका कारण तराईका १३ जिल्ला पीडित र प्रताडित छन् ।
२०७० चैत्र २८ गते बिहारको सीतामढीमा अवैध हतियार तथा लागू औषध कारोवार नियण्त्रण गर्ने विषयमा नेपाल— भारत सीमा प्रहरीवीच वैठक बस्यो । त्यस वैठकमा भाग लिएर फर्केका महोत्तरीका एक प्रहरी अधिकृतले भने,“अवैध हतियार कारोवार वा प्रयोग गर्नेले छुट पाए भने समाजमा आतङ्क फैलन्छ भन्ने निष्कर्षमा दुवै देशका प्रहरी पुगेका छन् । दुवैे देशका प्रहरी अवैध हतियार र लागू पदार्थको कारोवार रोक्न प्रतिवद्ध हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।”सीमाका प्रहरीवीच यस्ता वैठकहरु नियमित रुपमा हुन्छन्् । निष्कर्ष उही निस्कन्छ ।
तर २०५७ देखि यताका वर्षमा नेपालको सीमा क्षेत्रका कपिलवस्तुदेखि मोरङ्गसम्मका १३ जिल्लामा ज्यान मार्ने, अपहरण गर्ने, लागू औषध भित्राउने र अवैध हातहतियारको कारोवार गर्ने अपराध ६ हजार भन्दा बढी भए । सुनसरी, रुपन्देही, नवलपरासी र मोरङ्गमा ज्यान मार्ने अपराध बढी छ भने सप्तरी, महोत्तरी, मोरङ्ग र रौतहट अपहरणमा । पर्सा, रुपन्देही, मोरङ्ग र सुनसरी लागूऔषधको व्यापारमा र पूर्वी तराईका ५ जिल्ला—मोरङ्ग, धनुषा÷सर्लाही, सिरहा र सुनसरी अवैध हतियारको कारोवारमा । मोरङ्ग जिल्ला यी चारै किसिमका अपराधले पीडित छ । सप्तरी, महोत्तरी, बारा र रुपन्देहीलाई अपराधकर्मीहरुले सुरक्षित सेल्टरका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । पीडितहरु भन्छन्—अवैध हतियारका कारण तराईमा अपराध र आतङ्क बढेको हो । प्रहरी भन्छन्, सुरक्षा गस्ती बढाएका छौं ।
एक मधेश एक प्रदेशका लागि जुनसुकै बलिदानी दिन तयार छौं - गुप्ता
तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जय प्रकाश गुप्ताले मधेशी जनताको राजनीतिक स्वशासनको संरचना मुलुकमा स्थापना नभएसम्म मधेश समस्याको समाधान नहुने बताएका छन् । मधेशी जनताको राजनीतिक स्वशासन भन्नु नै मधेशीहरुको स्वायत्त प्रदेश हो । गुप्ताले एक मधेश एक प्रदेश अनिवार्य रहेको बताएका छन् । यसको स्थापनाका लागि जुनसुकै बलिदानी दिएर लड्ने, तर आत्मसमपर्ण गर्न नहुने उनले बताए । उनले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति सम्वेदनशील अवस्थामा पुगेकाले ‘एक मधेश एक प्रदेश’को निर्माणका लागि ऐक्यबद्ध हुन मधेशी समुदायलाई आह्वानसमेत गरे । नयाँ संविधानमा उत्तर र दक्षिण जोडेर तराईलाई पाँ“च वा सात प्रदेशमा बाँड्ने तरखर भइरहेको भन्दै उनले त्यसो गरिए मधेशका लागि अस्वीकार्य हुने बताए । विराटनगरमा तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान जिल्ला कार्यसमिति मोरङले आयोजना गरेको एक दिने जिल्ला प्रशिक्षण शिविरलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक गुप्ताले यस्तो बताएका हुन् ।
मधेशी - एमाओवादी गठवन्धन - सत्ताको सांचो बन्दै
प्रमुख मधेशी पार्टीहरु र एमाओवादी विचको गणतान्त्रिक मोर्चाले भदौं भित्र संघीयता सहितको संविधानको अन्र्तवस्तूमा सहमती गर्न सत्तारुढ दलहरुलाई अल्टीमेटन दिएका छन । अर्को तर्फ सत्तारुढ काग्रेस र एमाले विचको दुरी वढदै गएका छन । साथै एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नका लागी विभिन्न तहमा गृहकार्य सुरु गरिसकेको देखिन्छ । काग्रेस आफनै नेतृत्वमा जसरी भए पनि नयां संविधान जारी गर्ने ठुलो कसरतमा जुटेको देखिन्छ । यसरी एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ र काग्रेसले आफनै नेर्तत्वमा संविधान बनाउने अध्यास विचको दुवै पक्षले आ आफनो आडको रुपमा मधेशी पार्टीहरु र एमाओवादी सम्मलीत गठवन्धनलाई राखेर हिसाव किताबको गर्नुको साथै यी पक्षहरुलाई फकाउन लागी परेको देखिन्छ ।
बाहिर हल्लामा रहेको काग्रेस एमालेको कटुताले कतै ओली सुशिल कोईरालाको सरकारवाट बाहिरिएर मधेशी-एमाओवादी सम्मलीत सरकार बनाउला कि भनेर चर्चा व्यापक सुनिनमा आएका छन । र, त्यसकै चाल पाएर होला काग्रेसीहरु प्रतिरक्षाका लागी विभिन्न उपायहरु ऋपनाउन थालेका छन । केही दिन अघि मात्रै काग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडल र महेश आचार्यले प्रमुख तीन मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरुसंग सामुहिक छलफल गरेर मधेशी पार्टीहरुलाई विश्वासमा लिन खोजेको बुझिन्छ । पौडेल र आर्चाले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संग गरेको उक्त छलफललाई कतिपय भित्रियाहरुले महत्वपुर्ण रुपमा व्याख्या गरेका छन ।
सिके राउत एक कदम अगाडी कि एक कदम पछाडी ?
केही बर्ष यता मधेशमा सक्रिय सिके राउत हिजो विहिवार संविधानसभाको समिती संग छलफलमा सहभागी भए । अमेरिकावाट शान्दार आफनो वैज्ञानिक जीवन परित्याग गरेर मधेशका लागी काम गर्न भनेर उनी पछिल्लो केही बर्ष यता मधेश केन्द्रित अनुसन्धान मुलक किताबहरु लेख्दै प्रकाशन गरिरहेका छन । उनी मधेशमा आए संगै मधेश छुटै राज्यको अवधारणा अघि सार्नेमा पर्छन । साथै उनी पछिल्लो समयमा स्वराजको को पनि प्रश्न उठाउने गरेका छन । राउतले विहिवार संविधानसभाको समितीमा एमाओवादी नेता बाबुराम भटराइ संग गरेको वार्तालाइ मधेशका पण्डितहरुले ऐतिहासिक परिघटनाको रुपमा चित्रण गरेका छन । राउतले समितीसंगको संवादको क्रममा जनताको छुटै राज्य बनाउने अधिकारलाई कानुनमै उल्लेख गर्न सुझाए । यसको अर्थ तत्काल उनी मधेश नेपाल भित्रकै एउटा संघीय राज्यको रुपमा स्विकार गर्न तयार रहेको सन्देश आउछ । यद्यपी राउतले खुलेरै यसको वारेमा अहिले सम्म त केही बोलेका छैन । तर उनको विहिवारे वार्तालाई मुख्य गरी दुई रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । पहिलो त उनी मधेशी पार्टीहरु भन्दा एक कदम अगाडी वढेर संघीयताको कुरा गरेका छन । अबको संविधानसभाले गर्न लागेको राज्य पुर्नसंरचनामा मधेशले पाउने संघीयता अधिकार सम्पन्न स्वायत्त हुनु पर्छ । यदी त्यसो भएन भने मधेशीहरु छुटै राज्य बनाउन कानुन सम्बत तवरले स्वतन्त्र हुन पाउनु पर्छ । यस माने उनी मधे्शी पार्टीहरु भन्दा एक कदम अगाडी रहेको बुझिन्छ भने दोस्रो तर्फ उनी अमेरिका देखि आए संगै उनले उठाउदै आएका छुटै राज्यको अवधारणवाट एक कदम पछाडी भएर संवैद्यानिक तवरले नै मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ भने । यी दुवै थरीका व्याख्या राउतको वारेमा अहिले देखिएको छ । यद्यपी उनको वास्तविकता के हो त्यो स्वयंम उनी आफै वा आउदो समयले प्रमाणित गर्ने नै छ ।
मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन मधेशी बुद्धजीवीहरुको सुझाव
छलफलमा डा सिके राउत पनि सहभागी थिए
मधेसी बुद्धिजीवीहरुले मधेसमा दुई प्रदेशसम्म बनाउन सकिने बताएका छन् । तर, उत्तर-दक्षिण चिरेको र पहिचानविनाको संघीयता स्वीकार्य नहुने उनीहरुले पुरानै अडान दोहोर्‍याएका छन् ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा। बाबुराम भट्टराईले मधेसका बुद्धिजीवी र अगुवाहरुसँग नयाँ संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मधेसका सवालहरुबारे परामर्श गरेका थिए । छलफलमा सीके लाल, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा, सीके राउतलगायतको सहभागिता थियो ।
‘राज्य पुनःसंरचना आयोग वा समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुपर्छ । पहिचान हाम्रो बटमलाइन हो भन्ने सबैको मत थियो’ अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अनलाइनखबरसँग भने । झाका अनुसार मधेसी बुद्धिजीवीहरुले एक मधेस प्रदेशको माग भएपछि सहमतिमा जाँदा दुई प्रदेशसम्म मान्न सकिने तर, उत्तर दक्षिण हुन नहुने बताएका छन् । मधेश प्रदेशको सीमा चुरे क्षेत्रलाई बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मधेसी बुद्धिजीवीहरुले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण आगामी संविधानले परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले नेपाली भएर पनि भारतीय भनेर हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
इबोला भाइरसको खतरामा मधेश
यतिखेर नेपालमा प्राणघातक इबोला भाइरसको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ। जनतामा त्रास छाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा इबोला संक्रमित भेटेको समाचार सुनेर/पढेर नेपाली जनता झन आतंकित बनेका छन्। अहिले नेपालभर जहाँत्यही इबोलाको चर्चा छ। गाडीमा यात्रा गर्दा होस् वा पसलमा चिया खाँदा जताततै इबोलाकै चर्चा सुनिन्छ। नेपाली मिडियाले त झन इबोलाबारे नकारात्मक चर्चा गरेर सर्वसाधारणलाई आतंकति पार्ने काम गरेको छ। प्राणघातक इबोलाबारे घातक कुरा गरेर मिडियाले कतिपय नेपालीको प्राण उडाउन लागेको छ।
इबोला भाइरस संक्रमणको सुरुवात पश्चिम अफ्रिकाका गिनी देशबाट सन् २०१३ को डिसेम्बरमा सुरु भयो। गिनीमा इबोला भाइरस जंगली जनावरबाट मानिसमा सरेको विज्ञहरुले बताएका छन्। हालसम्म लाइबेरिया, सियरालियोन र नाइजेरियामा व्याप्त रहेका भनिएको इबोलाबाट १ हजार बढीको ज्यान लिइसकेको छ। इबोला एक महामारीको रुप लिएको छ। यो महामारी रोक्न संक्रमण देखिएका देश जति प्रयास गरेपनि असफल देखिएको छ। र अन्य अन्य देशहरुमा पनि फैलिन थालेको छ। यो प्राणघातक इबोलाबाट बच्न विश्वभर सतर्कता अपनाइसकेको छ।
इबोलाको फैलँदो संक्रमणबारे सतर्कता अपनाउन नेपाल सरकारले पनि अफ्रिकी मुलुकबाट आउने पर्यटकका हकमा तत्कालका लागि नेपाल भ्रमणको भिसा नदिने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाली नागरिकलाई अफ्रिकी मुलुकमा भ्रमणका लागि रोक लगाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भदौ १ गतेदेखि हेल्थ डेक्स सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। तर विमानस्थलमा मात्र डेक्स खडा गरेर इबोलाबाट बाँच्न सकिदैन्। इबोला भाइरसबाट नेपाललाई जोगाउन हरेक सिमा नाकामा डेक्स खडा गरी सतर्कता अपनाउन जरुरी छ।
संजय साहको सम्पति रोक्का
जनकपुर बम काण्डमा संलग्नताको आरोप लागि पुरपक्षका लागि सिरहा कारागारमा रहेका निलंबित सभासद संजय साहको सम्पुर्ण सम्पति माथी रोक्का लगाएका छन । प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले साह सहित उनका आफन्तहरुको नाउँमा रहेको जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय जनकपुरलाई पत्राचार गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केशरमहल काठमाण्डौमा दर्ता भएको सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको उजुरीको सम्बन्धमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ तथा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०६६ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेकोले आवश्यक कागजातहरु यथाशीघ्र ब्युरोमा उपलब्ध गराई साह लगायत उनका आफन्तहरुको नाउँमा रहेका जग्गा कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन, बिक्री वितरण गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्न ब्युरोले मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
धनुषामा महिला हिंसाको घटना दोब्बरले बढ्यो
महिला हिंसा नियन्त्रणको नाउमा यहांस्थित गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु भइरहेको दावी गरिरहदा धनुषामा भने महिला हिंसाको घटना दोब्बरले बढेको छ ।
जिल्लास्थित आधा दर्जन बढी गैरसरकारी संघसंस्थाहरु महिला हिंसा न्युनिकरण गर्न अभियान चलाउदै आएका छन् । अभियान चलाउन ती गैरसरकारी संघसंस्थाले दातृ निकायको सहयोगको ठूलो भाग यसैमा खर्चेको देखाउदै आएको छ ।
ती संघसंस्थामा कार्यरत्त महिला कर्मचारीहरुले पनि महिला हिंसा न्युनिकरण भएको दावी गर्दै आएका छन् । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेलको तथ्यांकले भने उनीहरुको दावीलाई गलत मात्रै तुल्याएको छैन् ती संघसंस्थाको कामकाजमा समेत सवाल खडा गरेको छ ।
जिल्लामा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगबाट महिला हिंसा न्युनिकरणको नाउमा वर्षेनी यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले लाखौ रुपैया कमाउदै आएको तथ्य समेत स्पष्ट हुन गएको छ । बरु पछिल्लो दिनमा एकपछि अर्को गर्दै महिला हिंसाका कहाली लाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भएको छ । लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणकालिन अवस्था, फितलो कानूनी व्यवस्था, पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण लगायतका समस्याले गर्दा महिला हिंसा न्युनिकरण गर्न नसकिएको सरोकारबालाहरुको तर्क छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै धनुषा जिल्लामा कुटपीट, घर निकाला, किशोरी फरार, खान लगाउन नदिने, अंश सम्बन्धी, बहु विवाह लगायतका ६ सय ९९ घटनाहरु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेलले जनाए ।
मधेशमा मौलाउदै बलात्कार - पीडितमाथि कानूनी बोझ
बलात्कार जस्तो अपराधलाई समाजमा पैसाको लेनदेन गरेर मिलाउनु झनै ठूलो अपराध हो । तर यसरी बलात्कारका अपराधहरूलाई पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गराई समाजमा नै मिलाइएका थुपै्र उदाहरणहरू छन् । कतिपय पीडितहरू समाजलाई चुनौती दिंदै अदालतमा पनि पुगेका छन् । कानूनले तोकेको समयभन्दा केही ढिला भएपनि अदालतले मुद्दा हेरिदिने गरेको छ । तथापि बलात्कार सम्बन्धि अधिकांश मुद्दामा पीडित पक्षलाई पुगेको क्षति हेरेर दोषीलाई सजाय स्वरुप जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति लिनकै लागि पीडितले अदालतको ढोकामा निरन्तर धाइरहनु पर्ने अवस्था छ । दोषीको सम्पत्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी प्रावधानले पीडित पक्षलाई समयमै न्याय दिनुको साटो थप झन्झट बोकाइदिएको छ । यस्ता असहयोगी कानूनका फन्दामा जेलिएर अधिकांश बलात्कार पीडितहरू झन् निरीह बन्न पुगेका छन् ।
तराईका महिलाहरू बलात्कारजस्ता अपराधद्वारा लगातार पीडित हुँदै आएका छन् । उनीहरूले चाहेर पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । मानवअधिकार संरक्षण केन्द्र महोत्तरीका अध्यक्ष मदनकुमार झा भन्छन्, “हालसालै गरिएको एक अध्ययनमा बलात्कार पीडित महिलाहरू मध्ये २० प्रतिशत मात्र प्रहरीसम्म आइपुग्ने गर्छन् । बाँकी अपराधहरू स्थानीय भद्रभलाद्मीको पञ्चायतले आपसी लेनदेनमै मिलाई दिन्छन् ।” बलात्कार पीडितले प्रहरीकहाँ उजुरी गरिहाले भनेपनि साक्षी पाउँदैनन् । समाजले महिलालाई नै दोषी देखाएर लज्जित पार्छन् । कदाचित् पीडित पक्ष प्रहरी कहाँ पुगिहाले पनि प्रहरीले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिदिंदैन र मुद्दा नै फितलो बनाइदिन्छन् । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले चाहिने जति प्रमाण नखोजिदिनाले जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा नै दर्ता गरिदिंदैनन् ।
कृपा नामक संस्थाले सन् २०१३ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, प्रहरी, अभियोक्ता, न्यायिक वा अर्ध न्यायिक (प्र.जि.अ, स्था.वि.अ.आदि) निकायका कर्मचारीहरूलाई दोषीले घुस दिएर प्रभावमा पार्न सक्छन् भन्ने कुरामा ८१.९ प्रतिशत महिला तथा ९४ं.७ प्रतिशत पुरुष रहेको देखाएको छ । यसमाथि राजनीतिक दबाब दिने र न्याय किनेर दोषी उम्कने, उम्काउने खेलमा समाजले पनि साथ दिंदै आएको छ । त्यसैले अधिकांश मामिलाहरू प्रहरी वा अदालत समक्ष पुग्नै पाउँदैनन् ।
नेपाल बार एशोसिएसन महोत्तरी एकाईका अध्यक्ष विजय ठाकुर भन्छन्, “जति मामिला अदालतसम्म आइपुगेका हुन्छन्, ती सबै मुद्दा वास्तविक हुन्छन् । तर, यस्ता कतिपय मुद्दाहरू गाउँकै ‘पंचायत’मा मिलाउने गरिन्छ । यस्तो प्रथाले अपराधकर्मलाई प्रोत्साहन र संरक्षण मिलेको छ ।”
नेपाल बार एशोसिएसन महोत्तरी एकाईका पूर्व अध्यक्ष रामशङ्कर साह भन्छन्, “मुलुकी ऐन बाह्रौ संशोधनमा लोग्नेले स्वास्नीको मञ्जुरी बेगर करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी ठहर्ने व्यवस्था छ ।” हाडनाता करणीमा करणी गर्नेको महल अन्तर्गत निकटतक नातामा करणी गर्नेलाई दण्डनीय बनाएको छ । यस्ता मामिलाहरू त झन् बाहिर आउनै दिंदैनन् ।
के मधेश राजनितीले नयां कोर्स लिन लागेकै हुन त ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएको अघिल्लो दिन अर्थात गएको शनिवार मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्ष वानेश्वरमा भेला भएर मोदी संग के के कुरा गर्ने बारेमा छलफल गर्दै थिए । उता त्यही समयमा सबै मधेशी पार्टीहरुका जुझारु तथा सक्षम युवाहरुको एउटा जमात मधेशमा यी नेतृत्वहरुको विकल्पमा कसरी नयां शक्ति बनाउने वारेमा गहन मन्थन गर्दै थिए । यी दुई परिवेशले अगामी मधेश राजनितीको भविष्यलाई राम्ररी इकिंत गर्दैछन । दोस्रो संविधानसभामा मधेशी पार्टीहरु नराम्ररी पराजय व्योहोरे संगै वर्तमान सबै मधेशी पार्टीहरुका नेतृत्वहरु प्रति वाहिर संगसंगै पार्टी भित्रै पनि ठुलो असन्तुष्ट व्यक्त हुदै आएका छन । एकातर्फ यसो भईराख्दा नेपाली राजनितीमा महत्वपुर्ण प्रभाव राख्ने छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री देखि विदेशमन्त्री सम्मको भ्रमणले पनि मधेशी नेतृत्वको वारेमा महत्वपुर्ण सवाल खडा गरिदिएका छन । मधेश राजनितीका पंडितहरुले पछिल्लो यी परिदृश्यहरुलाई मधेश राजनितीले लिन लागेको नायां कोर्सको रुपमा विश्लेषण गर्छन ।
सिंहदरवार विभेदको प्रतिक हुन - महन्थ ठाकुर
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सिंहदरवार विभेदको प्रतिक भएको भन्दै मधेशका युवा नेताहरुलाई मधेश केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन । तमलोपाको भातृ संगठन तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टले आफनो छैठौ बार्षीक उत्सवको उपल्क्षयमा आयोजना गरेको, मधेश राजनितीमा युवा नेतृत्वको अवसर र चुनौती, विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ठाकुर मधेशका युवा नेताहरुलाई काठमाडौंको सिंहदरवार वरिपरि घुम्न छाडेर मधेशका गाउबस्तीमा जान सुझाए । सिंहदरवार भनेको विभेदको प्रतिमुर्ती हो, ठाकुरले भने, तपाईहरु मधेशका गाउबस्तीमा जानुस र आम मधेशी नागरिकसंग घुलमिल भएर आफनो राजनिती गर्नुस । कार्यक्रममा तमलोपाका उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीले अधिकार र नेतृत्व खासेर लिनु पर्ने भन्दै युवा नेताहरुलाई आफनो नेतृत्व क्षमताको आधारमा नेतृत्व खोस्न सुझाए । त्रिपाठीले भने, अहिले सम्म कसैले पनि अधिकार र नेतृत्व आफैले हस्तानान्तर गरेको छैन, यी दुई कुरा खासेर लिनु पर्छ, तपाई हरु पनि नेतृत्व गर्नु चाहनु हुन्छ भने, आफनो क्षमताको आधार अगाडी आउनुस, कसैलाई फर्खेर नबस्नुस । त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेशी युवाहरुलाई आफनो स्वयंम पनि आत्मलोचना गर्नु पर्ने बताए । सोनलले भने, इमान्दार तपाई युवाहरु आउनुस अगाडी वढौं, यी नेतृत्वहरु आफै पछि पछि आउछन ।
मोदी र मधेशी नेताहरु विच भेटवार्ता
नेपालको दुई दिने भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज दिउसो मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरुसंग सामुहिक छलफल गरेका छन । छलफलका लागी सबै मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरुले मोदी बसेको होटल हयात पुगेका थिए । छलफलमा सहभागी नेताहरुका अनुसार मधेशी नेताहरुले राजनिती स्थितरता विना मुलुक दिगो विकासको वाटोमा जान नसक्ने भएकाले संघीयता सहितको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आफुहरु लागी परेको बताएका थिए । त्यसैगरी मधेशको विकासमा भारतको साझेदारी, नेपाल भारतको सम्बन्ध अझै कसरी राम्रो बनाउने, हुलाकी सडक, मधेशका रेलमार्ग र चुरे संरक्षणको विषयमा मधेशी नेताहरुले मोदी समकक्ष कुराकानी गरेका थिए ।
मोदी संग मधेशी नेताहरु भोली दिउसो भेटदै
नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संग मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरु भोली दिउसो भेटदै छन । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका मोदीले भोली नै अरु पार्टीहरुका नेताहरु संग पनि भेटवार्ता गर्दै छन । मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरु संग मोदी हयात होटलमै दिउसो सावा दुई बजे भेटने कार्यक्रम तय भएको छ । मधेशी नेताहरुले भने मोदीसंग भेटनका लागी केही दिन यता छलफल तीव्र पारेका छन । यस अघि नै मधेशी पार्टीहरुका ६ जना अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री सुशिल कोईराला समकक्ष ४ बुदे माग सहितको ज्ञापन पत्र समेत मोदीको भ्रमणका सन्दर्भमा दिएका थिए । त्यसैगरी मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरुले शनिवार मधेशका बुद्धजिवीहरुसंग समेत छलफल गरेका थिए । छलफलमा मधेशका बुद्धजिवीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी संग भेटदा नेपाल भारत विच पुर्नावलोकन हुन लागेका १९५० को सन्धीको वारेमा समेत कुरा गर्न सुझाएका थिए । बुद्धजिवीहरुका अनुसार उक्त सन्धीको एउटा पाटो मधेशीहरु समेत भएकाले मधेशी नेतृत्वहरुले समेत त्यसमा चासो देखाएर आफनो सहभागी खोज्न सुझाव दिएका थिए ।
मोदी भ्रमण वारे जितेन्द्र सोनलको विचार
तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल
हाम्रो छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोली नेपाल आउदै हुनु हुन्छ । १७ बर्ष पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन लागेका छन । वडो महत्वपुर्ण कुरा त छ भने १७ बर्ष अगाडी नेपाल द्धन्दको सुरवाती चरणमा रहेको वेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो । र अहिले हाम्रो द्धन्द्ध उतरार्ध तिर रहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको फेरी नेपाल भ्रमण हुन लागेका छन । यस दृष्टिकोणले यो मोदीको भ्रमणलाइ महत्वपुर्ण रुपमा लिनु पर्छ । नेपाल दोस्रो संविधानसभा मार्फत नयां संविधान बनाउने अन्तिम कसरत गरिरहेको सन्दर्भमा र जसले नेपालमा जारी द्धन्दको व्यवस्थापन गर्ने कदमको रुपमा धेरैले लिने गरेका छन । यस अर्थ हाम्रो प्रभावशाली छिमेकीको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागी पनि यो एकदमै महत्वपुर्ण समय हो । जाहावाट नेपालका सवै पक्षहरुको भावना अनरुप नयां संविधान जारी गरेर मुलुक समृद्ध वाटो जाला की केही परम्परावादी शक्तिहरुको आडमा फेरी मधेशी लगायतका विभिन्न पक्षलाई असन्तुष्ट नै राखेर अघि वढने । मोदी विश्वमंचमा आफुलाई शक्तिशाली भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ र त्यसका लागी छिमेकीहरु पनि स्थिर र समृद्ध हुन त्यतीकै आवश्यक छ । मोदी यो कुराको महत्व बुझेरै नेपाल लगायतका आफना छिमेकीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन ।